Raising Dion 2019 – Myanmar Subtitles
Genre: Drama, Sci-Fi & FantasyReleased: 2019-10-04Networks: NetflixEpisodes:9Type: TVDuration: 50 minQuality: 480p WedRip, 720P WedRipView: 3,295
Raising Dion 2019 Myanmar Subtitles
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး Superheroesတွေဖြစ်လာခဲ့ရင်၊ Super Abilitiesတွေရလာရင်ဆိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ကြဖူးမှာပါ။ စွမ်းအားတွေရလာရင် လူကောင်းလုပ်မယ် လူဆိုးလုပ်မယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးက အဲ့လိုစွမ်းအားတွေရလာခဲ့ရင် Superheroဖြစ်လာခဲ့ရင်ရော???
Well… ဒီ Raising Dion ဆိုတဲ့ Netflixရဲ့ TV Series မှာ ဒီလို စွမ်းအားပေါင်းစုံရလာတဲပ Dionကို သူ့အမေက ဘယ်လိုပြုစုပျိုးထောင်မလဲ?၊ သူ့သားကိုစမ်းသပ်ချင်နေတဲ့ Agencyတွေဆီကနေ ဘယ်လိုလွတ်အောင်ပြေးမလဲ? ဆိုတာတွေကို ကြည့်ရမှာပါ။ Themeက Sci-Fi, Family, Dramaဖြစ်တာကြောင့် Family ပုံစံမျိုးပိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Shadowhunter ထဲမှာပါဖူးတဲ့ Alisha Wainwright က Nicole Reese
Ja’Siah Young က Dion Reese
နာမည်ကြီး မင်းသား Michael B. Jordan က Mark Reese
Jason Ritter က Pat
Jazmyn Simon က Kat
Sammi Haney က Esperanza Jimenez အဖြစ် အဓိကပါဝင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
Released Dateကတော့ Oct 4ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကြှနျတျောတို့ အားလုံး Superheroesတှဖွေဈလာခဲ့ရငျ၊ Super Abilitiesတှရေလာရငျဆိုပွီး စိတျကူးယဉျခဲ့ကွဖူးမှာပါ။ စှမျးအားတှရေလာရငျ လူကောငျးလုပျမယျ လူဆိုးလုပျမယျပေါ့။
ဒါပမေယျ့ တကယျလို့ ကိုယျ့ရဲ့သားသမီးက အဲ့လိုစှမျးအားတှရေလာခဲ့ရငျ Superheroဖွဈလာခဲ့ရငျရော???
Well… ဒီ Raising Dion ဆိုတဲ့ Netflixရဲ့ TV Series မှာ ဒီလို စှမျးအားပေါငျးစုံရလာတဲပ Dionကို သူ့အမကေ ဘယျလိုပွုစုပြိုးထောငျမလဲ?၊ သူ့သားကိုစမျးသပျခငျြနတေဲ့ Agencyတှဆေီကနေ ဘယျလိုလှတျအောငျပွေးမလဲ? ဆိုတာတှကေို ကွညျ့ရမှာပါ။ Themeက Sci-Fi, Family, Dramaဖွဈတာကွောငျ့ Family ပုံစံမြိုးပိုသှားမှာဖွဈပါတယျ။
Shadowhunter ထဲမှာပါဖူးတဲ့ Alisha Wainwright က Nicole Reese
နာမညျကွီး မငျးသား Michael B. Jordan က Mark Reese
Sammi Haney က Esperanza Jimenez အဖွဈ အဓိကပါဝငျသှားကွမှာဖွဈပါတယျ။
Released Dateကတော့ Oct 4ရကျနဖွေ့ဈပါတယျ။
Translated By J Jue Y
Raising Dion 2019 Episodes
#Raising Dion 2019 #Download Raising Dion 2019 Full Movie #Free Raising Dion 2019 Download
Supernatural Season 12 Complete